Barmaamijka xayeysiiska raadinta ee Apple wuxuu imaan doonaa Spain xagaaga kadib | Wararka IPhone
Barmaamijka xayeysiiska raadinta ee Apple ayaa imaan doona Spain xagaaga kadib
Ruben gallardo | | Dukaanka App
Qaabkan cusub ee loogu talagalay soosaarayaasha barnaamijyada iPhone ama iPad si ay ugu dhiirrigeliyaan abuuritaankooda App Store iyagoo adeegsanaya raadinta ayaa looga dhawaaqay WWDC 2016. Waqtigaas ka dib ayaa loo heli karay oo keliya Mareykanka. Xilligan liiskan waa la kordhiyay. In kasta oo xagaaga kadib ama dhammaadkeeda, Apple waxay ku ballaarin doontaa xulashadan dalal badan, oo ay ku jiraan Spain.
Waxaa jira laba nooc oo ah barnaamijkan xayeysiinta ah ee loo maro App Store - xusuusnow, kaliya ansax ku ah codsiyada iPhone iyo iPad. Mid ka mid ah ayaa ah Raadinta Xayeysiiska Horukacsan iyo Raadinta Xayeysiiska Aasaasiga ah, ikhtiyaarkan labaad ayaa ah midka ugu badan ee lagula taliyo horumariyeyaasha madaxbannaan oo aan ku jirin miisaaniyad aad u badan. Maxaa loogu talo galay barnaamijkan? Ku hel aragti badan oo codsiyada ah raadinta ay sameeyeen adeegsadayaasha keydka arjiga.
Sida aynu nidhaahno, xilligan noocan ah xayeysiinta iyo kor u qaadista shaqooyinka waa kaliya khuseeya wadamada qaarkood: Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, New Zealand, Mexico, Australia iyo Switzerland. Si kastaba ha noqotee, liiskan wuxuu kori doonaa dhammaadka xagaaga soo socda oo gaarey dalal kale sida: Japan, France, Germany, Italy, South Korea iyo Spain.
Waxaan la tashannay horumariyaha Rubén Fernández de la Codsiga TOC oo isagaa laftiisu noo xaqiijiyay inuu runtii imaatinkan imaan doono toddobaadyo yar kadib. Sidoo kale, waxaan ku siineynaa xoogaa burush ah waxaad ku sameyn karto qalabkan cusub. Kahor intaanan bilaabin, taas ayaan kuu sheegi doonaa waxaa lagu bixin doonaa halkii rakibid ama kharashkiiba halkii rakibi (CPI).
Taasi waxay tidhi, Raadinta Xayeysiiska Aasaasiga ah waa tallaabada ugu horreysa oo laga yaabee midka ay horumariyayaal badani rabaan inay isticmaalaan. Waa aalad si fudud loo adeegsado taas oo ah inaad kaliya dejiso yoolalkaaga: waxaad rabto inaad maal gasho, dalabka la xayaysiinayo iyo CPI-ga aad u dejisay. Apple ayaa sameyn doonta inta hartay oo dhan. Dabcan, waxaa jira a Xaddiga billaha ah ee lagu maalgelinayo ololayaasha: $ 5.000.
Si kastaba ha noqotee, iyadoo Search Ads Advanced, halbeegyada aad awood u yeelan doonto inaad xakameyso: qalabkee - ama qalabyada aad rabto inaad xayeysiiskaaga la soo bandhigo, dooro ereyada muhiimka ah, ma jiro xaddid miisaaniyad bille ah ama waxaad heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhagaystayaashaada, iwm. Waxaas oo dhan, sidaan kuu sheegayno, waxay ka bilaabmayaan dhammaadka xagaaga soo socda. Marka, isticmaale ahaan, bilow inaad u diyaar garowdo xayeysiiska App Store.
Via: Boostada Apple
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Barmaamijka xayeysiiska raadinta ee Apple ayaa imaan doona Spain xagaaga kadib
Apple waxay ku darsataa waxyaabaha Koobka Adduunka ah Siri, iyo dhammaan adeegyadeeda dijitaalka ah
Kuwani waa isbeddelada ay Apple ku sameysay arjiga buugaagta ee iOS 12